Ku saabsan Shirkadda - Long Bamboo Technology Group Co., Ltd.
Looxa goynta baasaboorka
Boodhka baasaboorka Bamboo
Bamboo kulaylka derin u adkaysta
Rakibka saxan baasaboorka
Bamboo rack khamri cas
Haystaha koobka bamboo
Waraaqaha Bamboo -hayaha Tuwaalka
Haystaha Bamboo Bamboo
Baabuurka kaydinta baasaboorka
Sanduuqa kaydinta baasaboorka
Sanduuqa Cadka Bamboo
Raashka dharka Bamboo
Sheybaarka Darbiga Bamboo
Rakibka Kabaha Bamboo
Caruurta kursiga baasaboorka
Miiska Laabista Bamboo
Sanduuqa kaydinta baasaboorka oo leh bamka
dhirta dhirta baasaboorka
Long Bamboo Technology Group Co., Ltd. waxay ku taalaa Degmada Jianyang, Magaalada Nanping, Gobolka Fujian, Waa shirkad saamileed ganacsi oo shisheeye ah oo isku dhafan R&D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta guriga ee bamboo, qalabka qurxinta dhismaha bamboo iyo mashiinada farsameynta bamboo ， Waxay leedahay 5 hoosaad iyo in kabadan 900 oo shaqaale.
Ka dib in ka badan 10 sano oo horumar joogto ah iyo hal -abuurnimo, Kooxda Bamboo Long waxay noqotay soo saare hormuud u ah wax soo saarka reerka bamboo ee Shiinaha. Iyada oo si joogto ah u kordhaysa maalgelinta qalabka horumarsan, Kooxda Long Bamboo hadda waxay leedahay khad wax soo saar otomaatig ah oo CNC ah, KUKA gacanta robot ee caqliga leh iyo qalab kale oo horumarsan oo tiknoolajiyad sare leh.
In warshadaha wax soo saarka baasaboorka, Long Bamboo Group ayaa aasaasay technology ugu horreeya iyo faa'iidooyinka brand, noqdo brand ugu horreeya ee Shiinaha.
Long Bamboo Group waa shirkad ganacsi oo ajnabi ah oo isku daraysa R&D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta alaabada bamboo. Waxay inta badan soo saartaa bamboo iyo alaab alwaax, baasaboor iyo alaab alwaax ah, iwm. Iyada oo la soo bandhigayo khadka wax soo saarka otomaatiga ah ee CNC oo badan, KUKA gacanta robot ee caqliga leh iyo qalabka horumarsan ee farsamada sare leh, kordhinta cilmi baarista iyo horumarinta alaabada guriga ee baasaboorka, isla waqtigaasna ku fidi aagag cusub sida agabyada baasaboorka ee khafiifka ah, mashiinnada farsamaynta otomaatiga ah ee bamboo iyo alaabooyin kale oo cusub sida alaabooyinka FMCG.
Waaxdeeda Nanping Zhubeli E-commerce Co., Ltd., waxaa la aasaasay Janaayo 2016, oo ku hawlan soo dejinta iyo dhoofinta iyo iibinta onlaynka ah ee alaabta guriga, miisaska, maacuunta jikada, sahayda xafiiska, iwm.
Fujian Maker Steel iyo Bamboo Houseware Co., Ltd.
Fujian Maker Steel iyo Bamboo Houseware Co., Ltd., oo la aasaasay Maajo 2018, waxay leedahay 25 shatiyada (oo ay ku jiraan 3 shatiyada hal -abuurka iyo 22 shatiyada moodalka korontada). Waa shirkad dhammaystiran oo isku daraysa naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta guriga ee biraha aan lahayn, alaabta jikada, alaabta xafiiska iyo alaabada bamboo birta ah. Sida laga soo xigtay dhismaha caadiga ah ee "warshad cagaaran", shirkadu waxay doorataa ilaalinta deegaanka oo horumarsan wax-ka-beddel otomaatig ah iyo khadka wax-soo-buufinta otomaatiga ah iyo khadka rinjiyeynta otomaatigga ah ee heerkulka hooseeya. Waxay ku guuleysatay in ka badan 70% habka wax soosaarka otomaatiga iyo eber formaldehyde oo ku saabsan habka buufinta. Waqtigan xaadirka ah, waxay inta badan soo saartaa bamboo bir ah iyo alwaax bir ah oo la isku daray.
Fujian Laab Abuurka Houseware Co., Ltd.
Fujian Bend Creativity Houseware Co., Ltd. waxaa la aasaasay Juun 2018. Waxay leedahay 16 shatiyada moodalka korontada. Waa shirkad ku takhasustay naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta iyo iibinta onlaynka ah ee alwaaxyada iyo bambooyinka qalooca, alaabta qaloocan iyo qalabka; naqshadeynta, soo -saarka iyo adeegga iibinta baasaboorka dibedda, alaabta guriga ee alwaaxa iyo alaabta guriga. Waa shirkad dhoofisa ganacsiga dibadda. Waxaan soo saarnay oo soo saarnay laba nooc oo badeecooyin ah (baasaboor qaloocan iyo alwaax adag) iyo saddex badeecadood oo taxane ah (taxanaha maqaayadda, taxanaha musqusha iyo taxanaha kursiga). Mustaqbalka, shirkaddu waxay ku tiirsanaan doontaa faa'iidooyinka kheyraadka kooxda ee bamboo, qoryaha bamboo, birta bamboo iyo mashaariic kale oo wax soo saar si loo horumariyo badeecooyin hal-abuur leh oo diiradda saaraya guriga qaloocan iyo alaabta guriga ee warshadaha
Nanping Longtai Customized Houseware Co., Ltd. waxaa la aasaasay Janaayo 2020, badiyaa waa soo saarista iyo iibinta alaabta guriga ee la habeeyay iyo alaabada guriga. Shirkaddu waxay u taagan tahay sidii iibiye wax -soo -saar leh oo wax -ku -ool ah, qaabaysan oo shaqsi ahaaneed ee alaabada bamboo, iyada oo xoogga la saarayo hadda iyo mustaqbalka wax soo saarka bamboo -shaqsiyeedka suurtagalka ah. Iyada oo loo marayo maareynta macluumaadka iyo soosaarka cutubka, shirkadu waxay diiradda saareysaa soosaarka baaxadda leh iyo jaangooynta ee alaabada la habeeyay ee shaqsiyeed. Marxaladda bilowga ah, shirkaddu waxay inta badan u adeegtaa alaabta bamboo ee loo habeeyay, Mustaqbalka, habaynta shaqsiyeed waxaa lagu xaqiijin karaa iyada oo loo marayo horumarinta wakiillada ama shabakadda internetka, si ay si joogto ah u hagaajiso tartannada asaasiga ah ee shirkadaha.
Fujian Longmei Innovation Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay Febraayo 2021, Waxay inta badan ku hawlan tahay R&D, soosaarka iyo iibinta alaabada bamboo, alaabada FMCG bamboo iyo mashiinada bamboo otomaatig ah. Badeecadaha hormuudka u ah waa bamboo FMCG iyo mashiinnada otomaatiga ee farsamaynta bamboo. Shirkaddu waxay qorshaynaysaa inay dhammaystirto dhismaha budada dhuxusha baasaboorka iyo khadadka wax -soo -saarka saxaraha bamboo dhammaadka 2021 -ka, oo ay bilaabaan inay socodsiiyaan wax -soo -saarka buuxa ee alaabta FMCG -da dhammaadka 2022. qaybo ka mid ah mindiyaha bamboo iyo fargeetooyin, iyo gogosha jaakadaha bamboo).
Waqtigan xaadirka ah, Kooxda Long Bamboo Group waxay heshay 169 shati oo la oggol yahay (128 oo ka timid shirkadda waalidka), oo ay ku jiraan 17 shatiyada hal -abuurka (14 ka yimid shirkadda waalidka)
Qalab cusub- Guddi baasaboor oo fidsan
Shirkadda Long Bamboo Technology Co., Ltd. 20 ...
Warbixinta mudaharaadka ee jarista bamboo b ...